Dowladda Soomaaliya oo soo saartay warbixinta billowga ah ee cahdiga caalamiga ah ee caruurta. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo soo saartay warbixinta billowga ah ee cahdiga caalamiga ah...
Dowladda Soomaaliya oo soo saartay warbixinta billowga ah ee cahdiga caalamiga ah ee caruurta.
Wasiirka Haweenka & Horumarinta Xuquuqda Aadanaha, Marwo Deeqa Yaasiin ayaa ku dhawaaqday soo saarista warbixinta billowga ah ee Soomaaliya ee ku aadan fulinta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta (CRC).
Wasiir Deeqo waxaa ay sheegtay in cahdigaasi uu ahmiyad weyn siinayo xuquuqda caruurta isla markaana ay Dowladda Soomaaliya u gudbisay Qaramada Midoobe. Qodobka 44-aad ee Cahdiga Caalamiga ah ee xuquuqda caruurta ayaa ku waajibinaya dowladaha xubnaha ka ah jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa in ay gudbiyaan warbixintooda billowga ah.
Cahdigan caalamiga ah waxaa ay Soomaaliya saxiixday sanaddii 2015-kii muddo afar sano kadib ahna waxaa ay Soomaaliya gudbisay warbixinta billowga ah ee fulinta cahdigaasi, 1984-tii ayaa ugu dambeysay in Soomaaliya ay ka warbixiso cahdiyada caalamiga ah oo ay saxiixdo.
Previous articleShir looga hadlayay iskaashiga hay’adaha ka shaqeeya xuduudaha dalka oo Muqdisho lagu qabtay.
Next articleDuqa Muqdisho oo guddoomiyay shir u dhaxeeyay dowladda hoose iyo Bankiga adduunka.